Gnome timu yakaratidza mugwagwa wekuvandudza muGnome 40 | Linux Vakapindwa muropa
Kwemakore akati wandei, iro gnome timu (inosanganisira vehunyanzvi vanopa uye Red Hat vashandi) yanga ichishanda kuvandudza zvakanyanya ruzivo rwevashandisi inopihwa neGNOME Shell.
Uye ndizvo izvozvo mushanduro 3.36, iwo makuru anovandudza, senge nyowani yekukiya skrini, zvinoonekwa, uye zvakasiyana zvishoma zvinowedzerwa, ivo vakavandudza ruzivo rwevashandisi muGNOME. Zvisinei, zvakawanda zvasara kuti zviitwe.
Iri basa rinoreva:
kurongeka kwenzvimbo kurongeka kwemaonero;
matangi anobatsira uye asina chinhu;
kunatsiridza kufamba pane yekubata pani;
bhurawuza uye uvhure zvinokwezva zvekushandisa.
Mushure memwedzi yekuongorora dhizaini uye pedzisa zvitanhatu zvakasiyana zvekutsvagisa, GNOME Shell timu inozivisa kuti ivo vakakwanisa kugadzirisa iyo Overview ficha yemabasa, ayo ndinovimba ichasvika nenguva yeGNOME 40 (yakarongerwa kuburitswa munaKurume 2021). Kana iwe uchinetseka kuti takafamba sei kubva pavhezheni 3.xx kuenda kunhanduro 40, iwe unofanirwa kuziva kuti vagadziri veGNOME vazivisa kuti inotevera huru yakagadzika vhezheni yedesktop nharaunda ichauya nenhamba nyowani yeshanduro.
Mushure mechazvino vhezheni 3.38, vashandisi vanozove nekodzero yeshanduro 40, iyo yakarongerwa kuvhurwa munaKurume 2021.
Nezve iro basa rakaitwa nguva pfupi yadarika kugadzirisa iyo GNOME chiitiko, vanochengetedza chirongwa ichi vanotsanangura kuti izvo zvakakosha zvezvinhu zvechizvino dhizaini vakashanda nemazvo, uye mune yekupedzisira research paive neyakajairwa sarudzo yeiyo nyowani dhizaini yemukati
Chikwata chinoshuma kuti izvozvi magadzirirwo akagadzikana.
"Tinofara kugovana navo uye tinokoka vabatsiri kuti vatibatsire kutora dhizaini nyowani kupfuura pekupedzisira!" »Tevere, iko kuvandudzwa kutsva kwakaitwa.
1 Yakagadziriswazve Mabasa Kuongorora
1.1 Iyo grid yekushandisa
1.3 Iyo nzira yemugwagwa
Yakagadziriswazve Mabasa Kuongorora
Iyo nyowani dhizaini inodzosera muongororwo wezviitiko kushandisa dimikira repakati renzvimbo. Nzvimbo dzebasa dzakarongedzwa zvakatwasuka uye vane hunhu hwepanyama. Mune bvunzo, vatori vechikamu vakaona zviri nyore kunzwisisa uye zvinokwezva.
Nzvimbo dzekushandira kuoneka nenzira inoteedzana, kubva kuruboshwe uchienda kurudyi. Iyi nhevedzano inogona kuve pani uye scroll. Uye zvakare, iwo mahwindo ane mifananidzo yekushandisa kubatsira kuzivikanwa, uye zita rehwindo rinoratidzwa pane mbeva pamusoro.
Iyo grid yekushandisa
Zvinoenderana nechikwata cheGNOME, basa rakawanda rakaitwa kare pa grid yeapp, saka dhizaini nyowani yakafanana neiyo yatove mune yazvino GNOME vhezheni (3.38). Chinhu chakakosha cheiyo nyowani nyowani ndiko kugadzirisa kwayo. MaLaunchers anogona kugadzirwazve pamadiro, zvese pamapeji akawanda uye mumafolda. Uku kudyidzana kwaive kwakangonzwisisika kune vanoedza, inonyora timu yeGNOME. Chekupedzisira, musiyano mukuru pakati peiyo nyowani dhizaini uye yazvino GNOME ndiko kutarisisa kwemapeji ekushandisa e grid, ayo ave akatwasuka panzvimbo pekutwasuka, sechikamu chezvezvezvezvezvezvezve nzvimbo dzenzvimbo dzekutarisa.
Iine yakasimba nzvimbo yemhando, dhizaini inotarisira kutsigira intuitive navigation uye maitiro. Sekureva kwevagadziri veGNOME, ichi ndicho chikuru chinokurudzira kuchinjisa kutarisisa kwenzvimbo dzebasa kubva pamufananidzo kuenda kunharaunda. Nenzvimbo dzekushandira dzakarongedzwa yakatwasuka, iyo axis yakatwasuka inogona kushandiswa kudzora kufamba mukati nekubuda kwepamusoro uye grid rekushandisa.
Aya marongero epakati akasarudzika nemaune kuitira kuti kufamba kugone kushanda senzvimbo mbiri-dzenzvimbo. Kuruboshwe nekuRudyi inokutendera kuti ufambe pakati penzvimbo dzekushandira, uye Kumusoro nekuZasi kunokutendera kuti upinde muongororo uye kuratidza gridhi rekushandisa. Zvinoenderana nezvikwata zveGNOME zvakazvishandisa, izvi zvine simba zvakanyanya kana uchifamba nemasaini epasipad.
Iyo nzira yemugwagwa
Kuti uwane chinangwa chako chekupedzisira, timu yeGNOME inoda kuenda kumberi nhanho. Pakutanga kuona, iwe unofunga kuita basa ririkuenderera mberi kugadzirisa dhizaini uye kugadzirisa chero yakasarudzika dhizaini nyaya. Kuendeswa kwacho kuchaitwa senge akateedzana ematavi akapatsanurwa anomhara mune gnome-shell tenzi. Neraki, ivo vanogadzira vanoyeuka, zvakawanda zvakaitwa kuti kodhi yekuratidzira iwedzere kuchinjika, zvichiita kuti izvi zvive nyore.
Iyo GNOME yekuvandudza timu inotsanangudza zvakare kuti marongero emamockups ari mune os-mockup repository. Zvakare, anonongedzera kuti ane dambudziko anotevera kutungamira muchirongwa cheGNOME-Shell. Vashandi vanoshuvira vanogona kuenda kunzvimbo mbiri idzi kuti vape zvipo zvavo.
Chekupedzisira, timu yeGNOME inoti kuona kukosha kwemhando yepamusoro ndiko kukoshesa kwavari. Naizvozvo, iwe unoronga kuita ekuvandudza mavhezheni eshanduko anowanikwa kuyedzwa sekutanga mukuita sezvinobvira. "Kuwanda kwevanhu kwatinokwanisa kumhanyisa kodhi uye nekupa mhinduro, zvirinani," vanodaro vanogadzira chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Gnome timu yakaratidza mugwagwa wekuvandudza muGnome 40
Ini ndinofarira kutwasuka kwekutwasuka kwenzvimbo dzebasa, sezvo dzichiitwa nyore neepakati mbeva bhatani.
Kana iko kutama kutsva kwakatwasuka, zvinoita kunge kopi ye deepin, tsitsi.